Fanateram-bokatra 05 Juin 2016
Accueil Ny fiainam-piangonana Hetsiky ny fiangonana Fanateram-bokatra 05 Juin 2016
Écrit par Vaomieran'ny enti-manana
« Faly Aho raha hoy izireo tamiko Andeha isika ho any antranon i Jehovah » Salamo 122 . 1
Miarahaba antsika rehetra mpianakavin'ny finoana.
Ny alahady 05 jiona 2016 ho avy izao no alahady fanateram-bokatra eto amin'ny fiangonantsika. Izany dia ho tanterahina amin'ny alalan'ny valompim-bokatra koa manasa antsika rehetra mba samy handray anjara amin'ny fanantanterahina izany. Manomboka zaraina amintsika izany ny alahady 29 mai 2016.
" Hafitoana no hitandremanao andro firavoravoana ho an i Jehovah Andriamanitrao eo amin ny tany izay ho fodian i jehovah satria hitahy anao Jehovah amin ny VOKATRAO rehetra sy ny asan ny tànanao rehetra koa dia hifaly tokoa hianao". Deotornomia 16 :15
Izany no hatao dia ho entina hamatsiana ireo adidy maro izay miandry ny fiangonana . Koa ny VOKATRA atolotrao no hery lehibe entina hampandroso izany. Koa manentana antsika rehetra hanatanteraka izany ampitiavana satria izay manome amin ny fitiavana no sitrakin ny Tompo.
Mirary soa samy ho tahian ny Andriamanitra